RealPlayer DVD burner: Olee Ọkụ RealPlayer faịlụ ka DVD
> Resource> DVD> RealPlayer DVD burner: Olee Ọkụ RealPlayer faịlụ ka DVD
RealPlayer bụ ihe ọzọ na free mgbasa ozi ọkpụkpọ dị ka VLC media ọkpụkpọ. Na ya, ị nwere ike igwu niile ewu video na ọdịyo formats. Tụnyere Windows Media Player na iTunes, ọ bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ike.
Ma ebe ọ bụ na ị na-ebe a, eleghị anya ị ga ghọtara na ọ bụghị ihe zuru okè. E nweghị nhọrọ isure videos jidesie a DVD? Nke a pụtara na ị pụghị ndabere ọkacha mmasị gị nkiri na a diski na-egwu ha na a standalone DVD ọkpụkpọ. Wee na-esure RealPlayer si faịlụ jidesie a DVD, ị kwesịrị a n'ezie DVD burner. Dị ka nke a, m ga-ukwuu nwere ike ikwu na Wondershare DVD Creator (DVD Creator for Mac). Ọ nwere ike na ọkụ fọrọ nke nta niile formats nke RealPlayer si video na ọdịyo jidesie a DVD. Dị ka ogologo oge RealPlayer nwere ike igwu ya, ị nwere ike ire ya na Wondershare DVD Creator. Lee ebe a maka nkọwa na-akwado mgbasa ozi formats. N'elu nke ahụ, Wondershare DVD Creator na-ahapụ gị mfe ime a DVD ngosi mmịfe na gị sara mbara collection nke foto na music.
Aga m na-egosi gị otú ị ọkụ gị onwe gị DVD nakwa dị ka ike a DVD ngosi mmịfe nzọụkwụ-na-nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Ibu Ibu RealPlayer si videos na na DVD Ntụgharị
Mgbe DVD Creator a guzobere na kọmputa gị, ẹkedori ya na isi window, pịa Import ịgbakwunye ọ bụla ebudatara RealPlayer faịlụ na nke ahụ bụ na kọmputa, ma ọ bụ dọrọ-na-dobe videos n'ime isi na windo. Na ekpe ebi ndụ nke interface, ị nwere ike effortlessly ịgbakwunye, ihichapụ ma ọ bụ ịhazi DVD si utu aha.
Atụmatụ: Ugboro abụọ-pịa ọ bụla dị video Ka ịhụchalụ (dị ka e gosiri screenshot n'elu).
Nzọụkwụ 2. Dezie videos na ịtọ video ikwu n'ụzọ
Ọ bụrụ na gị RealPlayer faịlụ na arụ orụ di uku na ị na-achọghị ịgbanwe ihe ọ bụla, mgbe ahụ, ikwu nke a nzọụkwụ. Ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla oghom ke gị video, ị nwere nhọrọ dezie ya na isi edezi ngwaọrụ gụnyere. Pịa Dezie icon nri na-esote na video aha na i nwere ike na-amalite na akuku, bugharia ma ọ bụ ewepụtụ gị video. Ndepụta okwu nwekwara ike-atụkwasịkwara jidesie gị faịlụ.
Nzọụkwụ 3. Malite na-ere ọkụ gị RealPlayer si faịlụ jidesie a DVD
Nke a RealPlayer DVD burner software e mere na-enyere gị aka ike a azụmahịa-dị ka DVD. Dị nnọọ họrọ a DVD menu na-amalite na ma hazie ya na gị ụtọ. Mgbe ị na-afọ ojuju na DVD ihe nkiri, pịa Ọkụ ka ọkụ gị RealPlayer si faịlụ jidesie a DVD na ndị mara mma họọrọ menu. Na a mfe ma ọkachamara RealPlayer ka DVD Ntụgharị, ị nwere ike n'ezie na-enwe vidiyo na ibu na ihuenyo TV!
Ọzọ Ihe RealPlayer
RealPlayer mbụ e wepụtara na aha RealAudio Player azụ na 1995. isi version, RealPlayer 11 e wepụtara na 2007 (2008 maka Mac version). Ọhụrụ version bụ RealPlayer 15 na abụọ dị iche iche mbipụta dị. The Basic bụ free iji, ma na ugwo Plus ($ 39.99) abịa na ụma kwukwara atụmatụ dị ka HD video ọkụ, DVD ọkụ, ngwa ngwa nbudata ọsọ na ndakọrịta nke na-ebufe ka obere ngwaọrụ.
Ọkụ MP4 ka DVD na Nero
5 ụzọ dị iche iche Ọkụ Dual Layer DVD
Olee otú Ọkụ TV Gosiri na DVD - Live TV Series ndekọ
Olee otú Jiri DVD Ada Ada na Windows
DVD Ada Ada - The Best Free DVD Iṅomi Software